မတူတဲ့ အ​တွေးနဲ့ ​ရေးပီဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မတူတဲ့ အ​တွေးနဲ့ ​ရေးပီဗျာ	13
မတူတဲ့ အ​တွေးနဲ့ ​ရေးပီဗျာ
Posted by naywoon ni on Apr 16, 2015 in Creative Writing | 13 comments
မတူတဲ့ အ​တွေးနဲ့ ​ရေးပီဗျာ သူကြီးတို့​ပြော်​​နေတဲ့ ကိစ္စ ကျုပ်​စိတ်​၀င်​စား​နေတာ​တော့ကြာဘီဗျ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ကျုပ်​က တစ်​​ယောက်​ထဲ ဘက်​ကွဲ​နေတဲ့ ဂွစာ တစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေ​တော့ ​ပြောသင့်​မ​ပြောသင့်​ စဉ်းစား​နေတာ ။ တစ်​ရက်​က အလင်းဆက်​နဲ့ facebook မှာ စကား​ပြောဖြစ်​ကတည်းက ​ပြောသင့်​မ​ပြောသင့်​ချိန်​​နေတာ ။ သတင်းစာ မှာ​ကြော်​ငြာမယ်​ဆိုတဲ့ ကိစ္စ​လေဗျာ ။ အင်​တာနက်​ ၀က်​ဆိုဒ်​ကို အသုံးပြု​စေချင်​လို့ ​ကြော်​ငြာတာက ဂျာနယ်​ သတင်းစာ က​ကြော်​ငြာတာက လူသိတာပဲရှိမယ်​ ။ အသုံးပြုဖို့မ​သေချာဖူးဗျ ။ အင်​တာနက်​က ​ကြော်​ငြာမှ အင်​တာနက်​သုံး​နေရင်းနဲ့​တွေ့တဲ့သူက တစ်​ဆက်​ထဲ သွားဖို့ လွယ်​သွားပြီ။ ဒါက ကျ​နော်​​တွေးမိတာ​လေ ။ အလွယ်​ဆုံးဘယ်​က စ​ကြော်​ငြာမလဲ ? ရှင်းပါတယ်​ ။ တစ်​နိုင်​ငံလုံး facebook ဖြစ်​​နေတာ အဲ့ဒိက​နေစတာက ​ငွေကုန်​​ကြေးကျ အသက်​သာဆုံးပဲ ။ page ဖွင့်​ထားတဲ့ အ​ကောင့်​က သုံးတဲ့ အင်​တာနက်​ဘိုးပဲကုန်​မယ်​ ။ ဒီ​တော့ ကျ​နော်​ စဉ်းစားထားတာက သူကြီးသ​ဘောတူမယ်​ဆိုရင်​ ကျ​နော့်​အ​ကောင့်​က​နေ သူကြီးဝက်​ဆိုဒ်​ နာမယ်​နဲ့ page တစ်​ခုဖွင့်​​ပေးမယ်​ ။ ကျ​နော့ facebook က fri အားနဲ့ သူကြီးရွာကြီး စည်​ကား ​အောင်​လုပ်​ကြည့်​မယ်​ ။ တစ်​လနှစ်​လ ​လောက်​က​တော့ သူကြီးဘာမှမပူနဲ့ ။ သူကြီးထုတ်​​ပေးမဲ့ စာမူခရှိတယ်​ ။ အဲ့ဒါမှ သူကြီးက အားမရ​သေးဘူး ။ ​ကြော်​ငြာရမှဆိုရင်​​တော့ လူအ၀င်​အထွက်​များတဲ့ ဆိုရှယ်​၀က်​ဆိုက်​​တွေက​နေ သူကြီးဖာသာ ​ကြော်​ငြာလိုက်​ထည့်​​ပေ​ရော့ ။ သူတို့က​တော့ ​ကြော်​ငြာခ ဘယ်​​လောက်​လဲကျ​နော်​မသိဘူး​နော်​ ။ သစ်​ထူးလွင်​တို့ ဧရာဝတီတို့ မိုးမခတို့ ​မောက္ခ တို့က ​ကြောငြာလက်​ခံတယ်​လို့ သူတို့ homepage မှာ​ရေးထားတာ​တွေ့တာပဲ ။ ဒါက သတင်းစာ တို့ဂျာနယ်​တို့မှာ ​ကြော်​ငြာထည့်​တာထက်​ ပိုပြီးအကျိုးရှိမယ်​ထင်​တာပဲ ။ ​နေ၀န်းနီ
2015 Apr 16 About naywoon ni
Wow says: ခု သိသလောက်တော့ ဒဂျီးက သူ့ဆိုဒ်ကို Word of mouth Ad/Marketing လောက်နဲ့တင်သွားနေတာဗျ…
တစ်ချို့တွေက နဲနဲနဲ့ ကျဲကျဲဝိုင်းတာမျိုးလေ.. ကျနော့်အယင်သိတဲ့ အေဂျင်စီတစ်ခုဆိုရင် ကန်ပနီကြီးလာတာထက် သေးသေးနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ရတာ ကြိုက်တယ်လို့ စီအီးအိုက ပြောဖူးတယ်.. သူ့ ပေါ်လစီပေ့ါ.. ဒဂျီးကတော့ ကြီးချင်သလား သေးချင်သလားမသိ… Web site ပြောပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: WoM အင်း
အဲ့သည့်​ WoM ဆိုတာကြီးက​ပေါ့​ညော်​
ဆားသိသ​လောက်​ အ​ကောင်း ၁၀​ယောက်​​ပြောရင်​ အဆိုး ၁၄​ယောက်​​လောက်​​ပြောတယ်​​ပေါ့​ညော်​
ဆားမှတ်​ထားတာမလွဲရင်​ အာ့ကြီးက​ ​ဗော်​လတိုင်းလ်​ ဖြစ်​ တန်း​ဂျေးဘဲလ်​ဖြစ်​ ​ပေါ်ပင်​ဖြစ်​ပြီး​တော့
အ၀ါ​ရောင်​သန်းတယ်​​ပေါ့​ညော်​ ပီး​တော့ ရီစပွန့်​ ​တောင်​အချိန်​ပြည့်​မရှိရင်​ ပရိုအက်​တစ်​မလုပ်​နိုင်​ရင်​
သုံးဖို့ခက်​သယ်​​ပေါ့​ညော်​ ဆားက​တော့ ဘာ့ဇ်​ ကိုပိုအား​ပေးတယ်​​ပေါ့​ညော်​
ဒါ​ပေသိ ဘာဇ့်​နဲ့ နာမည်​ထွားလာတဲ့ ဟိုမင်းတမီး​လေးလို​တော့ သဂျီးကို လိုးရှင်းမလူး​စေချင်​၀ူး​ပေါ့​ညော်​
ကဲကဲ ဆား ​ဘောပွဲဆက်​ကျိလျုက်​အူးမယ်​ ​ပေါ့​ညော်​
မြစပဲရိုး says: ကျားသားမိုးကြိုး ဟဲ့။
ဒီ စကားလုံး တွေ ခေါင်းထဲ ရှိနေတုန်း ကိုး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: သဘောမတူသလိုပဲ။
နို့မို့ အရင်ဆုံး ဖဘ Page မှာပဲ စည်ပြီး ရွာထဲမလာမှာ စိုးလို့။
naywoon ni says: fb page မှာ ​ခေါင်းစဉ်​နဲ့ လင့်​ပဲ​ပေးမှာ​လေ ။ ရွာထဲမှာလုပ်​ဖူးတဲ့ ဒီ​နေ့ပို့စ်​လို​ပေါ့ ပို့စ်​ထဲက စာသား လုံးဝ မပါဘူး ။ အဲ့ဒါမှ fbက လင့်​နှိပ်​လိုက်​ရုံနဲ့ ရွာထဲတန်း​ရောက်​မှ ခု fb သုံးတဲ့သူ​တွေက လိပ်​စာ​တွေဘာ​တွေမှတ်​လည်းမမှတ်​ဘူး ။ သိလဲမသိဘူး ။ အဲ့သဟာ​ကြောင့်​ ၀က်​ဆိုက်​လိပ်​စာ ​ပေးရုံနဲ့ ၀င်​လာမှာမဟုတ်​ဘူး ။ လင့်​​ပေးထားမှ လင့်​က​နေတစ်​ဆင့်​ဝင်​လာမှာ ။ ရွာapp ​လေးလုပ်​ကြပါဆို ပြင်​ညာရှင်​များက ချို​နေကြဒယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ဘယ်ခြေကလှမ်းလှမ်းညာခြေကလှမ်းလှမ်း
kai says: လုပ်ကြည့်လေ…။
သစ်ထူးလွင်ကိုမေးဖူးပါတယ်..။ တလ ၃၀လား..၄၀လားမသိ..။
ဒါပေမယ်သူတို့က.. ၀်ဘ်ဆိုက်နဲ့.. မိုဘိုင်း၂မျိုးခွဲယူသဗျ..။
naywoon ni says: ခု​လော​လောဆယ်​ အသုံးများတာက​တော့ မိုဘိုင်း​ပေါ့ဗျာ မိုဘိုင်း သုံးဖို့ရာအတွက်​ အပ္ပလီ​ကေးရှင်းကို ဘယ်​ဆိုင်​မှာထည့်​ခိုင်းထည့်​ခိုင်း ပိုက်​ဆံ​ပေးစရာမလိုဘူးဗျ ။ ဖုန်းအချင်းချင်းလဲ ဘလူးတု တို့ဇာပြာတို့နဲ့လဲ ကူးလို့ရသဗျ ။ သူကြီးလဲ ရွာအပ္ပလီ​ကေးရှင်း လုပ်​ထားသင့်​သဗျ ။ အခု မိုဘိုင်းသုံးတဲ့ သူ​တော်​​တော်​များများက ၀က်​ဆိုဒ်​လိပ်​စာနဲ့ ရှာရတာထက်​ အပ္ပလီ​ကေးရှင်းဖွင့်​ပြီး ၀က်​ဆိုဒ်​ထဲ ​ရောက်​သွားတာကို ကြိုက်​ကြတယ်​ ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အာ့.. အံဇာလုပ်တတ်တယ်… ဖုန်းအပလီသုံးချင်လို့ သူ့ကို လုပ်ဖို့ပြောနေတာ ကြာပြီ… နေ့ရွှေ့ညရွှေ့နဲ့ သဂျီးခွင့်ပုချက် လိုတယ်ဆိုတယ်ဆိုလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: တကယ်တော့လေ.. အဲ့လို လင့်ပေးထားတာကို လိုချင်နေတာ.. အဲဒါဆို ဖွင့်ဖြစ်တယ်.. တကူးတကဆို ဖုန်းနဲ့ဝင်ရတာ အဆင်မပြေလို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: အဲ့ ဘဂျီး သူ့ ဖွဘုတ်​အ​ကောင့်​မှာ အသစ်​တင်​တိုင်း ရှယ်​​ပေး​နေတုန်းက အ​ကောင်း​ဗျ
Myanmar gazette published an article ဆိုတာနဲ့ ဂွပ်​ ဆို ​ပြေးဝင်​ပြီးသား
အခုမှ ဘာအ​တွေးနဲ့ ပြန်​ဖြုတ်​လိုက်​လဲမသိ
အခု page ​ထောင်​ထားတယ်​ဆိုရင်​
ကိုယ်​​တွေ ဘာမှ လုပ်​စရာမလိုဘဲ အသစ်​တင်​တိုင်း page မှာ သွားပြီး publish လုပ်​​အောင်​ ထားလို့ရတယ်​ (အဲ့လာ သဂျီးကိုဖြည့်​ခိုင်း ပိုက်​ပိုက်​လဲမကုန်​ဘူး ဒီအတိုင်း​လေး ထည့်​​ပေးထားရုံ)
ပြီး​တော့မှ page ကို ဖွဘုတ်​မှာ ပိုက်​ပိုက်​​ပေး ​ကြော်​ငြာလိုက်​ (ပိုက်​ဆံ သူသွင်းလိမ့်​မယ်​)
အ​ကောင်းဆုံးပဲ ပွဲကြိုက်​တဲ့ ခင်​နှမရယ်​” Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinn Z says: အိုးးး လူသိမများလို့ တယောက်မှ(ကျနော်ကအစ)ဝင်မလာတော့ရော ဘာအရေးလဲ
.ကြော်ငြာချင်သပဆိုရင် ပြည်တွင်းက ရုပ်သံလိုင်းတွေမှာ ကြော်ငြာတာ အကောင်းဆုံး
ကာလသား/သမီးတွေ စိတ်ဝင်စားလောက်တဲ့ ပုံတွေနဲ့သာ ကြော်ငြာ
.ကြာကြာ နေ မနေ. . .
naywoon ni says: နီ့ ရုပ်​သံလိုင်းမှာကြည့်​​နေတဲ့သူ​တွေက ​ကြော်​ငြာ ဂုရု တစ်ိုက်ကြည့်​​နေမယ်​များထင်​လို့လား ။ ​ဝေးပါ​သေးရဲ့ ။ သူရို့ကျိ​နေတဲ့ ဇာတ်​ကားအရှိန်​ပျက်​လို့ ​ကြော်​ငြာဆို ဘာ​ကြော်​ငြာမှ စိတ်​မ၀င်​စားတာ ။ ရုပ်​သံကြည့်​ရင်း ဖုန်းပွတ်​​နေတယ်​များ​အောက်​​မေ့လို့လား ။